Hakone, uhambo oluvela eTokyo | Izindaba Zokuhamba
IHakone, uhambo oluvela eTokyo
UMariela Carril | | Amathiphu, Tokyo
Olunye lwezimpawu ze Japan Kuyintaba iFuji kepha ngaphandle kokuthi usesakhiweni eside kakhulu futhi nesibhakabhaka sicacile impela akubukeki kahle kakhulu kusuka eTokyo. Ukuze ukwazise, ​​kanye nezinye izintaba, amahlathi namachibi amahle, kufanele ushiye idolobha.
IHakone ingenye yezindawo ezithandwa kakhulu futhi kunconyiwe uma kukhulunywa ngokuhlangabezana nechibi laseJapan. Isondele kakhulu eTokyo futhi njengoba ezokuthutha zisebenza ngokweqile lapha, kulula futhi ziyashesha. Futhi ngesikhathi! Ake sibone lapho esingakwenza futhi sikubone eHakone.
1 Ungafika kanjani eHakone
3 Yini ongayivakashela eHakone
Ungafika kanjani eHakone
Uma ungumvakashi futhi uthenge i- Kudlula ujantshi waseJapan ezweni lakho ungasebenzisa imigqa ye-JR, okungukuthi, imigqa yomphakathi. Kepha kwesinye isikhathi kuzofanela uye kulayini wangasese bese ukhokha umehluko. Lokhu kuvamile eJapan: yize i-JR yinde kakhulu, kwesinye isikhathi kufanele uye kolayini wangasese. Ngenhlanhla, hhayi njalo.
Nge-JR ufika e-Odawara futhi lapho ungasebenzisa noma izitimela ezizimele noma amabhasi. Ufika nge-shinkansen usuka esiteshini saseTokyo noma eShinagawa ngesigamu nje sehora. Kumele kube yizitimela zakwaKodama kanye nezinye iHikari ngakho-ke buza ehhovisi lapho usondela ukubhuka ithikithi (hhayi bonke abama iHikari e-Odawara). Enye inketho ukuthatha isitimela sendawo noma esisheshayo eTokyo, esingolayini we-JR Tokaido noma umugqa we-JR Shonan Shinjuku. Konke kumbozwe yi-JRP.
Umasipala ubanzi futhi unamadolobhana amaningana asezintabeni, amanye atholakala osebeni lwamachibi noma esigodini. Indawo yonke ixhunywe yinethiwekhi enhle yezitimela, amabhasi, izindlela zekhebula, ama-funiculars nezikebhe. Ibuye inikeze ngokuhlukile izivakashi ziyadlula ngamanani ahlukene. Okungukuthi:
UFuji Hakone Pass: ihlanganisa ezokuthutha endaweni futhi ezungeze neFuji Five Lakes. Kuyizinsuku ezintathu futhi ngokuzithandela kufaka phakathi ezokuthutha ezisuka eTokyo. Kubiza ama-yen angama-5650, cishe ama-dollar angama-50.
I-Hakone Free Pass: Izinsuku ezimbili noma ezintathu kufaka ukusetshenziswa okungenamkhawulo kwazo zonke izitimela ze-Odakyu, amabhasi, ama-funiculars, ama-cableways nezikebhe endaweni. Futhi, ngokuzikhethela, uhambo lokuya nokubuya eTokyo. Kubiza ama-yen angama-4000, cishe ama-euro angama-40.
I-Hakone Kamakura Pass: Kuyindlela yokudlula ebiza kakhulu futhi inikeza izinsuku ezintathu zokusetshenziswa okungenamkhawulo kwezitimela kunethiwekhi ye-Odakyu, ezokuthutha ngaphakathi nasezindaweni ezizungeze iHakone, nokufinyelela eKamakura. Kubiza ama-yen angama-6500.
UHakone ingaphansi kwamakhilomitha ayikhulu ukusuka eTokyo nendawo enhle ongayijabulela iziphethu ezishisayo, bukela ama-lagos futhi ngethemba ukuthi i- Fujisan. Izindawo zokungcebeleka zase-Onsen zithandwa futhi indlela enhle yokuzijabulela ukulala eRyokan, indawo yendabuko yaseJapan. Kukhona wonke amanani futhi ngiyakuqinisekisa ukuthi isipiliyoni sikufanele.
Bese kuba khona amadolobha afudumele afanele njengeYumoto, eduze kwase-Odawara, elinye lamadolobha adumile. Kukhona ama-ryokan afihlwe ezintabeni, ngokwesibonelo, namanye ogwini lweLake Ashi. Uma ungahlali e-ryokan usengakujabulela ukugeza okushisayo kwentwasahlobo esidlangalaleni, okuvulekele izihambi, ngama-yen aphakathi kuka-500 no-2000. Bhala phansi amagama ala ryokan: Tenzan, Hakone Kamon, Yunosato Okada, Hakone Yuryo noma uKappa Tengoku.
Yini ongayivakashela eHakone
IJapane yizwe elinentaba-mlilo lapho i-geography yayo iphawuleka ngomlando wayo ohehayo. UHakone unokuningi ukubona kanjalo ungakhetha ukwenza futhi ubone yonke into noma uzilinganisele kusekethe elincane. Kuya ngalokho ofuna ukukwenza nesikhathi onaso.
Ngokuba isifunda esifushane Yehla esitimeleni e-Odawara noma eHakone-Yumoto bese uya esitimeleni saseTozan ukuthi ngemuva kwemizuzu engu-50 yokuhamba iphela eGora. Lapha uthatha i-funicular uye esiteshini sokugcina, ushintshele ku-cableway bese uphelela ogwini lweLake Ashinoko. Ungawela leli chibi ngesikebhe bese uqeda eHakone-Machi noma eMoto-Hakone kusuka lapho ungathatha khona ibhasi ubuyele lapho uqala khona. Lesi sifunda ayihlali ngaphezu kwamahora amathathu.
Futhi i- isifunda eside nesiphelele? Wehla esitimeleni e-Odawara noma eHakone-Yumoto. Uma wehla esiteshini sokuqala ungabona i-Odawara Castle okukude ngemizuzu eyi-10 futhi egqumeni. Uma ungathathi i- isitimela sevintage, iTozan, iya esiteshini saseHakone-Yumoto, idolobha elincane kodwa elihle. Kunehhovisi lezokuvakasha elinabasebenzi abakhuluma isiNgisi abazokunikeza amamephu nezincwajana zalokho ongakwenza futhi ubone lapha.
Ngokusobala, kunezindlu zokugeza ezishisayo futhi ungahlala usuku olulodwa. Uma ungabuyeli esitimeleni ngoba umzila osele muhle, khuphuka igquma. Ufika kufayela le- Isiteshi seMiyanoshita, nama-onsen amaningi. Nali ihhotela elidala, lekhulu le-XNUMX, lapho ungaphuza khona noma udle okuthile. Iziteshi ezimbili kamuva, ku I-Chokokuno-Mori, unezindawo ezinhle kakhulu zeHakone neHakone Open Air Museum enikezelwe ebaziwe.
Uma uhamba imizuzu eyishumi ufika UGora, intwasahlobo eshisayo yaseTozan. Lapha ufika ku-funicular okhuphuka intaba. Isitobhi ngasinye sinezaso kodwa uhambo luphela Souzan uyithathaphi i- I-Hakone cableway lokho kukuyisa ngqo ezindaweni eziphakeme ohambweni lwamakhilomitha amahlanu. Uhhafu unayo Owakudani, indawo ezungeze umgodi owaqhuma eminyakeni eyizinkulungwane ezintathu eyedlule futhi namuhla egcina ama-fumaroles e-sulfuric, amachibi ashisayo nemifula yamanzi ashisayo. Futhi, esimweni sezulu esihle ungabona iMount Fuji.
Kulapha lapho ungathenga khona amaqanda aphekwe ngqo emanzini wentaba-mlilo nokuthi amnyama kakhulu. Wake wayibona ku-TV? Kunezindawo zokudlela nezitolo. Uma ungumuntu othanda izinto eziningi futhi uletha izicathulo ezintofontofo ungaqhubeka nokuhamba ufinyelele esiqongweni seNtaba iKamiyama neNtaba iKomagatake. Lapha uthatha i-funicular futhi bese wehlela eLake Ashinoko. Vumela ukuhamba amahora amabili nomoya kanye nesifutho esenzeka ngezikhathi ezithile.
Uma ungafuni ukuhamba ibanga elide, unomzila ophakathi nendawo: uhamba isigamu sehora uye eNtabeni iKamiyama bese wehlela ogwini lweLake Ashinoko. Budebuduze ne-Hakone funicular exhuma ne-Owakudani. Vumela uhambo lwamahora amahlanu. I-Owakudani ingesinye seziteshi zeHakone funicular exhumanisa iSouzan neTogendai.
Ungakwazi futhi ukuhamba ngesikebhe eLake Ashinoko, ichibi le-caldera eliyingxenye yekhadi lokuposa le-Fujisan lakudala. Kunamadolobhana osebeni lwawo, akukho okuthuthuke kakhulu, nezindawo zokungcebeleka ezimbalwa. Kunezinkampani ezimbili ezinezikebhe zokuvakasha futhi lolu hambo aluhlali ngaphezu kwesigamu sehora futhi lubiza cishe ama-yen angu-1000. Ngisho nomunye wemikhumbi ngumkhumbi wamakhumbi futhi omunye uyisiphepho seMississippi. Iqiniso ukuthi ngokuhamba kwesikhathi isifunda eside sinconyelwa kakhulu ngoba uzobona cishe yonke into uHakone anayo ngawe.
Ngalokho, iseluleko sami ukuthi usithathe njengohambo lwezinsuku ezimbili noma ezintathu. Uhlala endaweni, uhamba ngezinyawo, uyaphumula, uyaphuma ebusuku bese ubuyela eTokyo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » Tokyo » IHakone, uhambo oluvela eTokyo
Lungisa izinhlelo zakho eqhweni nezingane